Xildhibaan Dalxa oo ka hadlay xildhibaanada mooshinka ka wada xukuumadda Soomaaliya – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Xildhibaan Dalxa oo ka hadlay xildhibaanada mooshinka ka wada xukuumadda Soomaaliya
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inuu jiro guux siyaasadeed oo ka dhashay go’aankii ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhex taagan dalalka Khaliijka iyo dowladda Qadar.
Xildhibaan Dalxa ayaa caddeeyay inay jiraan siyaasiyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka faa’ideysanaya arrinkaasi, islamarkaana dadaal ku bixinaya mooshinka ka dhanka ah xukuumadda uu hoggaaminaayo ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Dhinaca kale, wuxuu xildhibaan Dalxa beeniyay inuu jiro tiro rasmi ah oo laga haayo xildhibaanada mooshinka ka wada xukuumadda ra’iisul wasaare Kheyre, balse uu jiro guux siyaasadeed oo laga dareemayo gudaha baarlamaanka Soomaaliya.
Dhawaan ayay ahayd markii uu magaalada Muqdisho ka furmay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo xildhibaanada ku kacsan xukuumadda la sheegayo inay tiradoodu yar tahay, waxaana arrinta mooshinka ay tahay guux hoose oo aan dibadda usoo bixin.
Hadalka kasoo yeeray xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeysay la hadal haayay in qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay wadaan mooshin ka dhan ah xukuumadda uu hoggaaminaayo ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.